लोसारको वास्तविक अर्थ र मनाउने तरिका – Everest Times News
लोसारको वास्तविक अर्थ र मनाउने तरिका
बौद्धधर्मवलाम्बी विभिन्न समुदायहरुले महान चाडको रुपमा मनाउदै आएको लोसारको आगमन भएको छ । विभिन्न समयमा फरक नामले लोसार मनाउदै आएपनि च्या ल्हो ग्याल्बो लोसारको आगमान भने फेबु्रअरी महिनाको २७ तारिखबाट हुने भएको छ । यसैदिनदेखि २१४४ औ च्या ल्हो अर्थात चरा वर्षमा प्रबेश हुने भएको छ । धार्मिक तथा ऐतिहासिक परम्पराअनुसार हरेक वर्ष धुमधामका साथ मनाउदै आएको ल्होसार तिब्बती चन्द्रमासको पात्रो अनुसार मनाउदै आएको छ । यो पात्रोमा ३ सय ६० दिनभित्र पृथ्वीले सुर्यको एक फन्को पुरा गरि अर्को फन्काको नयाँ सुरुवातलाई ल्होसार अर्थात नया वर्ष फेरिएको मानिन्छ ।
यही नयाँ साल फेरिएको खुसीयालीमा विजय उत्सब झै घरपरिवार र समाजमा निकै रमाइलो गरी लोसार मान्ने प्रचलन छ । बौद्धधर्मको तिब्बती ज्योतिष शास्त्रमा आधारित भएतापनि यो सम्बत सम्पूर्ण मंगोल मुलका साझा पात्रो मानिन्छ । बुद्ध धर्मको कालचक्र, ज्योतिस शास्त्र ,चीनको नक्ची ज्योतिस शास्त्र , भारतको कर्ची ज्योतिस शास्त्र अनुसार तयार परेको हुनाले यो पात्रो ज्यादै प्रभावकारी मानिन्छ ।
हाम्रो पुर्खौली बोन धर्म र अज्ञात धर्ममा आधारित परम्परागत पाँच शक्तिहरुमा १.लह(आत्मा) २.सोक(जीवन) ३.लु(शरीर) ४ ओङथङ(व्यक्तिगत शक्ति) र ५. लुङ्गता(बायु घोडा) विधि समेटेको पाइन्छ । यो पात्रोले प्रकृति पूजा सम्बन्धी सम्पूर्ण तिथि मिति र शुभ साइत समेत पष्ट निकाल्ने गरिएको छ ।
बौद्धधर्मवलाम्बी विभिन्न समुदायहरुले लोसार चाड मनाउने क्रममा ग्याल्पो ,सोनाम र तोला गरि फरक फरक तिथिमा मनाउदै आइरहेको छ । फरक फरक नामले ल्होसार मनाए तापनि सबैको मूल उद्देश्य भनेको पुरानो बर्षलाई बिदाई गरि नयाँ बर्षलाई स्वागत गर्नुनै हो । शाब्दीक अर्थमा ग्याल्पो भनेको (राजा ) र लोसार भन्नाले नया वर्ष हो र तिब्बतको पहिलो राजा न्याठी चेङपोको गद्दी आरोहणको उपलक्ष्यमा नामकरन गरिएको बुझिन्छ । त्यसै गरि सोनाम (कृषक ) ले मान्ने लोसार कृषकहरुको फुर्सदको समय अनुकुलतामा मनाउने चलन रहेको छ । त्यस्तै तोला (नोवागी ) कुनै बालिको नोवागी खाने चलनलाई भनिन्छ । स्मरण रहोस नाम फरक भएपनि भुटानदेखि मंगोलिया (छागन सर) सम्म यो पात्रोको अनुसरण गरेको पाइन्छ । यसै पात्रोको आधारमा जन्म ,मृत्यु ,शुभ ,असुभ , खाम , लोर्ता,लगन देखि पूर्व जन्म र अर्को जन्ममा कहा केको कोखमा जन्मिने छ भनेर चिना हेरिने गरिन्छ ।
तर अहिलेसम्म विभिन्न समुदायले यी तीन किसिमको लोसार मनाउदै आइरहेको हामी सबैले देखेका छौ । जो जसले जसरी ल्होसार मनाएपनि फरक नाम र तिथिमा लोसार मनाउनु हुने समुदायलाई मेरो के अनुरोध छ भने तपाईहरु पहिचान र जातीय दम्बको कारण मात्र चाड मनाउदै आएको हो ? यदि बिना ज्योतिस पात्रो अनुसार यस्तो फरक फरक मनाउने कार्यले निरन्तर पाइरहेमा अबको भाबी पुस्तालाई निकै ठुलो अन्याय गरेको मेरो ठम्याई रहेको छ । तसर्थ यदि शेर्पाले ग्याल्पो त्याग्ने, तामाङ र ह्योल्मोले सोनाम त्याग्ने र गुरुङले तोला त्याग्ने भन्ने सहमति भैहालेको खण्डमा ग्याल्पो लोसारको बदलामा ग्याल्लो अर्थात् बिजय वर्षा अंगिकार गरे उचित देखिन्छ । किनकि ग्याल्लोको अर्थ विजय भन्ने हुन्छ । भगवान बुद्धको लिलासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले पनि ग्याल्लो लोसारको महत्व बिसेष रहेको पाइन्छ । किनकी भगवान बुद्धलाइ त्यस ताका ब्रम्हाणबादी ऋषिमुनिहरुले पटकपटक शक्ति प्रस्तुत गर्न धम्कीको बाबजुत भगवान बुद्धले कट्टरपन्थी हिन्दुहरुलाई हराई पूर्व शर्तअनुसार उनीहरु बुद्धको दर्शन अनुसरण गर्न बाध्य भएका थिए । लाखौको समुपस्थितिमा सम्पन्न उक्त प्रतियोगिता लोसारको पहिलो दिन छेवा चिदेखि देखि १५ गते छेवा च्याङसम्म चलेको धार्मिक ग्रन्थहरुमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
इतिहासकारहरुका अनुसार बौद्धधर्मवलाम्बीले मनाउदै आएको तीनवटै लोसारको उत्तिकै महत्व भएको तर वर्ष परिवर्तनसँगै मनाउने लोसार भने ग्याल्पो लोसारनै भएको भनाइ रहेको छ । बौद्ध अनुयायी मध्ये महायानी धर्मशास्त्रले दिएको तिथिमिति अनुसार पनि ग्याल्पो लोसार नै साल फेरिएको हो भन्ने पुष्टि गरेको छ । मुलुकको राजनितिक परिवर्तनसंगै अब देशमा धेरै जनसंख्या भएको बौद्धमार्गीको यो नयाँ वर्ष अब राष्ट्रिय पर्वको रूपमा ग्याल्पो लोसारलाई मनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
यो साल फेरिने क्रममा पात्रो अनुसार २१ सय ४४ वर्ष पूरा भएको छ तर सोनाम ल्होसार मान्दै आएको तामाङ लगायत अन्य समुदायहरुले २८ सय ५३ वर्ष अघि झिंवा लोमा जतिखेर चीनको एक पहाडमा पहिलो पटक मञ्जु श्रीले ला (वर्ग) परम्पराको विषयमा धर्म देशना गरेको तिथिलाई सोनाम लोसारको संबत परिवर्तन हो भनी लोसार मान्दै आएको इतिहासकारहरुको भनाइहरु रहेको छ । तर इतिहास केलाएर हेर्ने हो भने यो सम्बत् ४७ सय १५ पुगेको दाबी गर्छन् भने केहीले यसलाई मञ्जुश्री जन्म भएको दिनको रुपमा मान्दै आएको भएपनि यो कुनै ज्योतिस शास्त्रमा प्रमाण भेटिएको पाइदैन ।
लोसार कुनै जाति विशेषको इच्छामा जतिखेर पायो त्यतिखेरनै नया साल फेरिएको भनेर मनाउनु उपयुक्त देखिदैन । तिथि अनुसार परिवर्तन हुने मितिले नया वर्ष जनाउने हुदा ल्होसार कहिल्यै पनि जाति विशेष हुन नसक्ने दाबी इतिहासकारहरुको रहेको छ । हामी वीच धार्मिक तथा सास्कृतिक पहिचान जे छ त्यही अनुसार लोसार मान्नु सवैको लागि उपयुक्त हुनेछ । विश्वभर मानिदै आएको लोसारलाई परिवर्तन गर्नु र पहिचान भन्दै जातिगत रुचिको आधारमा मनाउदै जानु हामी बौद्धधर्मावलम्बीहरुको लागी फाइदा होइन । तिथि नबुझकीकना लोसार मान्ने होइन लोसार शब्दलाई समेत जानी जानी भत्काएर ल्होछार लेख्दै आएको चलनले पनि लोसारको बास्तविक पहिचानलाई खल्लो बनाएको छ । बौद्धधर्मको ग्रन्थ अनुसार पनि लोसार भनेको नया वर्ष हो तर लोछार भन्ने शब्दाले नया वर्ष पुरा सकिएको फरक अर्थ बुझाउछ । यसबारेमा ल्होछार लेख्ने समुदायहरुले बौद्धधर्म शास्त्रको अध्ययन गरि यथासक्य लोसारनै लेख्न थालेमा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
लोसार मनाउने तरिका
लोसार आउन अगावैदेखिन घरमा अन्नको रस (डिछयाङ) पकाउनुको साथै लोसारको विशेष परिकार खाप्से बनाउने गरिन्छ । लोसार लाग्न तीन दिन अघि छेवा ङिसुगु २९ औ दिन घर सरसफाई गरि बेलुकी परिवारका सदस्यहरु वीच गुथुक खाने चलन छ । गुथुकमा नौ ९ प्रकारका गेडा गुडी ,सागसब्जी राखेर पकाउने गरिन्छ । यही गुथुकभित्र आपसमा रमाइलोको लागि विभिन्न कुराहरु राखिएको पिठोको डाल्लोभित्र नुन ,अंगर ,खुर्सानी, काठ, नुन र सेतो चामल जस्ता कुराहरु पोको परेर राख्ने गरिन्छ । यी कुराहरु गुथुकमा भेला भएकाहरुले आआफनै भागमा परेको डल्लो खोलेर रमाइलो गर्ने चलन पनि रहेको छ । ती डल्लोले आ आफनै विशेषता दर्साए अनुसार खुर्सानी पर्ने रिसालु ,अंगर पर्ने मनकालो, नुन र चामल पर्ने मनकारी भनेर चलन रहेको छ । गुथुक खाएको भोलिपल्ट औसीको दिन लु फालेर बर्सभारिको दशा ग्रह शान्त गरिने भनाई अनुसार विहानीपख पुजा र धार्मिक गतिविधिहरु गर्ने चलन रहेको छ ।
औशिको दिन सरसफाई गरि पूजाकोठा सजाउने र भोलिपल्ट छेचीको दिन बिहान सबेरै उठेर पधेरोमा गई तीन वटा डुङगामा सफा घिउको टिका लगाएर पानी देवताबाट अमृतको रुपमा पानी मागेर ल्याउने चलन रहेको छ । त्यो दिन सवैभन्दा छिटो जसले पानी भरेर ल्याउछ उसले जलपरिको दर्शन पाउनको साथै अमृत जल पाइने विश्वास गरिनछ । त्यही पानी देवथानमा चडाउनुको साथै धुप र बत्ति बाल्नुको साथै छिमार र खाप्सा चढाउने गरिन्छ । त्यसपछि अभिभावकलाई चिया, खाप्सा र छिमार कुममा लगाएर आर्शीवाद लिने चलन रहेको छ । यसो गर्दा छिमार दिनेले टसीदेलेक फुन्छोगछोक र लिने तेन्दुदेवा तोबरस्योग भनेर शुभकामना आदानप्रदान गर्ने गरिन्छ । त्यसपछि चिया र अन्नको रस छयाङग्युरसंगै खाप्सा खाएर परिवारमा रमाइलो गरिन्छ । ल्होसारको पहिलो दिनलाई लमे लोसार अर्थात् गुरुजन हरुको लोसार पनि भन्ने चलन छ । यो दिन गुरुहरुबाट प्रसादको साथै आर्सीबाद थप्ने र दक्षिण दिने चलन पनि रहेको छ । त्यस्तै दोस्रो दिन नाङबी लोसार अर्थात परिबारको लोसार भन्ने गरिन्छ । यस दिन बाहिर ननिस्कि घरमा सबै परिबारको सदस्यहरु भेला भई चोखो मिठो खाई शुभ कामना आदान प्रदान गर्ने चलन रहेको छ । तेस्रो दिन छ्योक्योंग लोसार अर्थात् धर्मपाल अर्थात कुल देवताहरुको लोसारको रुपमा मान्छि ।
यो दिन गर्ने पुजालाई ल्हाप्सो गर्ने पुजाको रुपमा मानिन्छ । यस दिन गुम्बामा गएर वा सफा डाडामा गएर ध्वजापताका लुङदा लगाउने र धर्मपाल अर्थात कुलदेवताहरुको पुजा गरि अनेक थरिको धुप हालेर धार्मिक पुजापाठ गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै यस दिन गाउका सबै मिलेर साङसेरकिम गरि रमाइलो गर्ने गरिन्छ । गाउघरतिर हो भने लोसार लागेको पहिलो दिन देखि पुर्णिमा सम्म लगातार विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाउने चलन रहेको छ ।
अन्तमा बौद्धधर्मको पवित्र ग्रन्थ र पात्रोको आधिकारिक तथ्यको साथै भगवान बुद्धले प्रर्दशन गर्नु शक्तिलाई फरक फरक लोसार मान्नेहरुले स्मरण गरि एउटै तिथिको लोसार मान्ने सदबुद्धि सवैलाई प्रदान गरुन भन्ने भगवान बुद्धसग प्रर्थना गर्न चाहान्छु ।
जीवन सुन्दर छ बाँचौ र बचाँऔ
संस्कृत आधुनिक बोझ
भारतसँगको सिमा विवाद समाधानको उपाय
'उच्च मनोबल र सबैको कामनाले दोस्राे जुनी पाए'
साथी अनि साथ
कोभिड १९ चुनौति र सम्भावना
किन आवश्यक छ नेपालीलाई सेन्सस् २०२० मा सहभागी हुन ?
तालिवानलाई मूलधारमा ल्याउने अमेरिकी प्रयास
कोरोना भाइरस : किन बनाइन्छ घृणाको सिकार ?
नेवा को हुन्
नेपाली कां‌ग्रेस र रगतसँग जोडिएको जनसम्पर्क समिति